Daawo Sawirrada: Ciidamo Mareykan iyo Soomaali Ah oo Dad Shacaba Ku dhibaateeyay Deegaanka Sabiid Ee Sh/hoose.
Sunday October 23, 2016 - 06:16:57 in Wararka by Super Admin
Khamiistii lasoo dhaafay ciidamo caddaan Mareykan ah iyo maleeshiyaad Soomaali calooshood u shaqeystayaal ah ayaa duullaan ku qaaday deegaan dhaca duleedka degmada Afgooye Sh/Hoose.
Ciidamada Shisheeye iyo maleeshiyaadka wada socda waxay gaareen deegaanka Sabiid oo qiyaastii 7 KM ujira magaalada degmada Afgooye, cadawga ayaa markii ay gaareen deegaanka waxay gabood fallo bahalnima ah kula kaceen dadka deegaanka.
inta badan dadkii Sabiid deganaa ayaa isaga cararay guryahooda intii ciidamada Mareykanka iyo kuwa Afrikaanta ah ay heysteen deegaanka.
Koox wariyayaal oo ka howlgala warbaahinta islaamiga ah ayaa kaamiradooda u qaatay sidii ummada Islaamka ay ugu soo bandhigi lahaayeen xaqiiqda ka jirta deegaanka iyo dhibaatada ay geysteen maleeshiyaadka.
Muuqaallo laga soo qaaday waxay muujinayaan burburka guryo ay deganaayeen dad shacab ah ,dhibaatada ayaa waxay ka weyneed burburka guryaha iyadoo xittaa maleeshiyaadka ay boobeen wixii agab ahaa ee yiillay guryaha deegaanka.
Mid kamida dadka deegaanka ayaa warbaahinta islaamiga ah u sheegay in ciidamada caddaanka ah iyo kuwa Afrikaanka ay jirdileen dad waayeella ah oo awoodi waayay in ay ka cararaan cadawga.
Ciidamada shisheeye kuma negaan Sabiid wax ka badan 3 saacadood oo markii dambe ayay dib ugu laabteen saldhigga ay ku leeyihin degmada Wallaweyn oo ay kasoo duullaan tageen.